राष्ट्रपति भण्डारीको विकल्प खोज्न लागिएको खुलासा, ओलीले तोकीदिए अबको राष्ट्रपति — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति भण्डारीको विकल्प खोज्न लागिएको खुलासा, ओलीले तोकीदिए अबको राष्ट्रपति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनले एमालेको सरकार ढाल्यो । गठबन्धनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुर्याएपछि अब शीतलनिवासको पनि व्यवस्थापनबारे चहलपहल बढेको चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बनाइन लागेको खुलासा तत्कालिन प्रम ओलीले नै गरेका हुन् ।
यतिबेला एमाले ओलीपक्ष राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइने भन्दै चिन्तित छ । ओलीले निकटवर्तीहरुसँग भने ‘चोलेन्द्र, झलनाथ र रामचन्द्रमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेका छन् रे !’ ‘यत्रो राम्रो काम गरिरहेको राष्ट्रपतिलाई यसरी गालीगलौज गर्ने ?’ ओलीले भने ।
ओली निवास बालकोटमा बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यबारे कुराकानी गर्नका लागि माधवपक्षका अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, मन्त्री केशव पाण्डे र प्रमुख सचेतक दीपक निरौला लगायतको उपस्थितिमा केही दिनअघि भएको कुराकानीमा ओलीलेचिन्ता व्यक्त गर्दै अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा, एमाले नेता झलनाथ खनाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्रमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाइने भन्दै नामै किटेका हुन् ।
देउवालाई बिन्ती गर्दै जब ओलीले भने- मेरा मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनुस् न प्लिज…
‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?’
ओलीले अमेरिकासँग गरिएको मिलिनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन एमसीसीबारे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा के गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न बिर्सिएको हो भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोधेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ती अभिव्यक्तिका भिडियो सार्वजनिक गरेर अहिले वातावरण बनाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘तपाईंको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीबारे के गर्नुहुन्छ ? चुप लागेर हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री देउवालाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै त्यसले के गर्छ भनेर उनले देउवालाई प्रश्न गरेका हुन् । उनले यसबारे जनताले जान्न चाहेको बताए ।
देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई ‘जत्था’ को संज्ञा दिँदै ओलीले भने, ‘तपाईं त बहुत मजबुद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । १६५ सिट तपाईंको साथमा छ । तपाईंको पछाडि छ । स्ट्रोङ, कसैको साथ चाहिँदैन तपाईंलाई । कसैको मद्दत चाहिँदैन तपाईंलाई । त्यो १६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने कि चुप लाग्ने ?’
ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई ‘जत्था’ भनेका हुन् । देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा १ सय ६५ सांसदले समर्थन गरेका थिए । ती सांसदलाई ओलीले रोष्ट्रमबाट ‘जत्था’ भनेका हुन् ।
फेरि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बन्छु
ओलीले आफु फेरि असाधारण बहुमतका साथमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हट्नु कुनै चिन्ताको विषय नरहेको बताए । उनले आगामी चुनावबाट असाधारण जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा मुलढोकाबाट प्रवेश गर्ने दाबी समेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने,‘विश्वमा पहिलो रेकडै बनेको छ । अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने । अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन । प्रधानमन्त्रीबाट हट्न परेकोमा चिन्ता छैन ।
अदालतजस्तो सबैले विश्वास गनुपर्ने संस्थाका बारेमा अविश्वास नआओस् भन्ने चिन्ता मेरो छ । लोकतन्त्रमा मेरो चिन्ता छ ।’ सरकार गठन भएको एक महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु सरकारको असफलता रहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् ।